Ny sandan'ny fiara PURO dia mipetaka ho an'ny iPad sy iPad 2 | Vaovao IPhone
Ny nofinofin'ny ankizy tsirairay (fa tsy ny zaza loatra) dia ny hahafahana mitsangatsangana amin'ny alàlan'ny fijerena sarimihetsika, filalaovana lalao na fitetezana ny harato. Raha manana iPad na iPad 2 ianao, ny fametrahana rafitra haino aman-jery amin'ny lohan'ny fiaranao dia maharitra segondra vitsy noho ity tendrombohitra novokarin'ny marika italiana PURO ity.
Aorian'ny fitsambikinana dia ho hitanao ny pitsopitsony rehetra mifandraika amin'ity vokatra ity sy ny fametrahana azy ao anaty fiara.
Voalohany indrindra, tianay ny hanasongadinana ity fanohanana ity fa manan-kery ho an'ny iPad voalohany sy ho an'ny iPad 2. Ny PURO dia naka ny sain'ny mpampiasa rehetra ny takelaka Apple ary ao anaty fonosana dia manome zana-kazo roa natao manokana ho an'ny kinova tsirairay. an'ny iPad.
Ny fametrahana ny bracket amin'ny lohan'ny fiara dia atao ao anatin'ny segondra. Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny fametrahana ny vatan'ny mpanohana, izay ilay miraikitra amin'ny fehiloha. Mba hanaovana izany, mila manamboatra fotsiny ity sombin-tsolika ity amin'ny bar izay tafiditra ao amin'ny lohan-doha miaraka amin'ny sisa amin'ny seza isika ary mametraka ny hidim-piarovana mba hifamatotra tsara ny zava-drehetra.
Marihina fa ny elanelana misy eo amin'ny bara dia azo ahitsy ary ny tohana dia manaiky ny savaivony hafa. Izaho dia nanandrana azy tao amin'ny Fiat Dobló izay malalaka kokoa noho ny mahazatra ny bara ary mihantona tsy misy olana ny mpanohana.
Raha vantany vao nametraka ny vatan'ny mpanohana isika, dia manohy manantona ny rindrina hametrahantsika ny iPad. Mila mifanitsy amin'ny isa 4 fotsiny isika ary misintona kely mankany ambony mba hifanaraka tsara ireo faritra roa ireo. Farany, mila mametraka ny iPad izay zara raha hitondra antsika 2 segondra isika.
Raha vantany vao tafangona ny zava-drehetra ary efa eo an-toerana ny iPad, ny fanohanana dia manome antsika ny fahafaha-mifehy ny fizoran'ny takelaka sy ny zoro fijerena, ahafahana mamindra ny diplaoma marobe amin'ireo torolàlana rehetra. Amin'ny alàlan'ny famadihana voanjo elatra eo afovoan'ny fanohanana, afaka mamela toerana miorina sy milamina isika mba tsy hahafahan'ny mpandeha manova azy.
Araka ny hitanao dia tsy mety ny valiny, tao anatin'ny segondra vitsy monja dia nametraka efijery mihoatra ny 9 santimetatra ao amin'ny lohan-doha isika ary tsy jerena ny maodelin'ny fiara. Adinoy ireo mpikambana kely indrindra ao an-trano manontany anao indray hoe "mbola lavitra ve?"
Ny vidin'ity fanohanana novokarin'i PURO ity dia 39,99 euro ary azonao vidiana mivantana ao amin'ny tranokala ofisialin'ny mpanamboatra na amin'ny mpivarotra kojakoja rehetra amin'ny fitaovana Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny sandan'ny fiara PURO dia mipetaka ho an'ny iPad sy iPad 2
AledroBT dia hoy izy:
Aiza ny fampahalalana momba ny fifaninanana?
Valiny amin'i AledroBT
Tutorial: mamorona hitsin-dàlana fitendry mahazatra amin'ny iPhone tsy misy jailbreak